China metal mpempe akwụkwọ Fiber laser ọnwụ igwe emepụta na suppliers |UNIONLASER
Ụdị: Efere eriri laser ọnwụ igwe
Ọnụ ahịa: $14499-$26899
Atụmatụ maka eriri metal laser ọnwụ igwe
1. Metal mpempe akwụkwọ fiber laser ọnwụ igwe, na-ebu Raycus / IPG / Max ike isi iyi, ike 1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w maka ịcha ụdị nile nke metal ọkpụrụkpụ si 3.1mm
Mpaghara ịkpụ 3000*1500mm
Ike Laser 1000w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 120000w
Ụdị Laser Raycus fiber laser isi iyi (IPG/MAX maka nhọrọ)
Ịcha Ọsọ 0-40000mm/min
Ọsọ njem kacha 80m/min, Acc=0.8G
Ịnye ọkụ 380v, 50hz/60hz, 50A
Ogologo Efefe Laser 1064 nm
Obosara ahịrị kacha nta 0.02mm
Sistemụ Rack mere na Germany
Sistemụ Chain Igus mere na Germany
Nkwado usoro eserese AI, PLT, DXF, BMP, DST, IGES
Sistemụ ịnya ụgbọ ala Japanese Fuji Servo moto
Tebụl arụ ọrụ Sawtooth
Gas inyeaka Oxygen, nitrogen, ikuku
Ọnọdụ jụrụ oyi Mmiri jụrụ oyi na usoro nchebe
Nhọrọ nke akụkụ mapụtara rotary usoro
Ibu igwe 2000-3000kg
Ubi Ngwa igwe:
1. Ngwa ngwa:Akụrụngwa Laser Fiber dị mma maka ịkpụ ọla na mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara, efere igwe anaghị agba nchara, mpempe akwụkwọ nchara, Alloy Steel Plate, Spring Steel Sheet, Plate Iron, Galvanized Iron, Mpempe akwụkwọ galvanized, efere aluminom, mpempe ọla kọpa, mpempe ọla, efere ọla. , Plate Gold, Plate Silver, Plate Titanium, Metal Sheet, Plate Metal, Tubes and Pipes, wdg.
2.Application Industries: A na-eji UnionLaser Fiber Laser Cutting Machines n'ọtụtụ ebe n'ichepụta Billboard, Mgbasa Ozi, Ihe ịrịba ama, Signage, Akwụkwọ Ozi Metal, Akwụkwọ Ozi LED, Kitchen Ware, Akwụkwọ Ozi Mgbasa Ozi, Nhazi Metal, Ngwa ọla na akụkụ, Ironware, Chassis, Racks & Cabinets Processing, Metal Crafts , Metal Art Ware, Elevator Panel Cutting, Hardware, Auto Parts, Glass Frame, Electronic Parts, Nameplates, etc.
Kedu ihe nwere ike ịkpụ laser fiber?
Ụdị ọla niile, dị ka igwe anaghị agba nchara, Carbon Steel, Mild Steel, Galvanized Steel, Aluminum, Copper, wdg.
Kedu uru Fiber Laser Cutting Machine gị bara?
Isi iyi laser kachasị elu: ogo beam kwụsiri ike, ogologo ndụ ọrụ;
Usoro njikwa enyi na enyi: Ọ dị mfe iji, ọbụnadị aka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike ịmalite ngwa ngwa;
Ọrụ pụrụiche: nzaghachi ngwa ngwa, ọrụ ọrịre ahịa ogologo ndụ niile
Amaghị m nke igwe dabara m?
A2: Biko kpọtụrụ anyị ma gwa anyị:
1) Ngwa gị,
2) Oke kachasị nke ihe gị,
3) Max ịkpụ ọkpụrụkpụ,
4) Common ịkpụ ọkpụrụkpụ,
Mgbe m nwetara igwe a, mana amaghi m otu esi eji ya.Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Anyị ga-enye ntuziaka onye ọrụ na vidiyo nke igwe.Na mgbakwunye, injinia anyị nwekwara ike ịnye ọzụzụ n'ịntanetị.Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwekwara ike ịnye ozi site n'ụlọ ruo n'ụlọỌ bụrụ na ụfọdụ nsogbu dakwasịrị igwe a n'oge akwụkwọ ikike, gịnị ka m ga-eme?
UnionLaser ga-enye akwụkwọ ikike afọ 3, ma nyekwa akụkụ efu n'oge oge ikike igwe ma ọ bụrụ na igwe nwere nsogbu ụfọdụ.
Anyị na-enyekwa ọrụ ndụ ogologo oge ọrịre ahịa n'efu.Yabụ, nsogbu ọ bụla, nweere onwe gị ka anyị mara, anyị ga-enye gị
Kedu ka esi akwụ ụgwọ na kedu banyere oge nnyefe?
Anyị na-anabata ịkwụ ụgwọ site na T / T, kaadị kredit, ịkwụ ụgwọ ụlọ akụ n'ịntanetị, PAYPAL, Pay later etc. Oge ndu 10-15 ụbọchị ọrụ maka igwe ọkọlọtọ; Oge ndu 15-20 ụbọchị ọrụ maka igwe na-abụghị ọkọlọtọ.
Nke gara aga: Igwe eji egbutu Laser na-arụ ọrụ dị elu 3000w - Igwe eji egbutu eriri laser dị elu - UnionLaser
Osote: CNC Pipe Laser Cutting Machine nwere eriri Laser isi iyi
CNC Pipe Laser Cutting Machine na Fiber Laser ...
New ụdị 2000w metal mpempe akwụkwọ eriri laser cutter